सृजना फाइनान्समा ३५% तरलता पर्याप्त छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता सृजना फाइनान्समा ३५% तरलता पर्याप्त छ
अन्तरवार्ता 20 views
सृजना फाइनान्समा ३५% तरलता पर्याप्त छ
भवानीशङ्कर चापागाञी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सृजना फाइनान्स, विराटनगर
विराटनगर केन्द्रीय कार्यालय रही मोरङ, सुनसरी र सप्तरी जिल्लामा मुख्य कार्यालयसहित २० ओटा कार्यालयबाट सेवा दिइरहेको सृजना फाइनान्स कारोबारको १८औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भएको समाचार आइरहँदा सृजना फाइनान्समा भने समस्या नरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भवानीशङ्कर चापागाञीले बताए । यसै सन्दर्भमा आर्थिक अभियानका प्रजिता बुढाथोकीले उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सृजना फाइनान्सले १८ वर्षमा प्रवेश गर्दासम्म हासिल गरेका उपलब्धिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सृजना फाइनान्स १८ वर्षमा प्रवेश गरेको अवस्थामा पछिल्लो ५ वर्षको उपलब्धिलाई मैले महत्त्वका साथ हेरेको छु । ५ वर्षअघि यसको करीब १६ करोडको मात्र कारोबार थियो भने अहिले करीब साढे ४ अर्बको कारोबार गर्न सफल भएको छ । त्यसमा पनि लगानीकर्तालाई दिएको प्रतिफलको हिसाब हेर्दा विगतका वर्षहरूमा १ वर्ष ६० प्रतिशत अर्को वर्ष ५० प्रतिशत र यस वर्ष मात्रै हामी ३२ दशमलव ५ प्रतिशत प्रतिफल दिने तयारीमा छौं । यसको अलावा सृजना फाइनान्सको उपलब्धिको कुरा गर्ने हो भने ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ वाणिज्य बैङ्कको पहुँच नपुगेको अवस्था छ । जस्तै– सप्तरीको पातो, सुनसरीको हरिनगरा जस्ता विकट क्षेत्रमा गएर पनि हामी सेवा दिइरहेका छौं । यसरी उपलब्धिको हिसाबमा हामी व्यवसायी र सेवा प्रदायक दुवैको रूपमा सफल छौं । गतवर्षको अवस्था मात्र हेर्दा बचतमा ५५ प्रतिशत र कर्जा प्रवाहमा ४४ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ । अहिलेको प्रगति हेर्दा म निकै उत्साहित छु ।
फाइनान्स सञ्चालनको क्रममा तरलता समस्या देखिएको छ ?
हामीलाई अहिलेसम्म तरलताको समस्या भएको छैन । तरलताको सम्बन्धमा म के भन्छु भने अहिले विकास बजेट प्रयोगमा आएन । त्यस कारण बजारमा तरलता अभाव भयो भन्छन् । हुन नेपालमा मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पनि यो अवस्थाको सृजना हुन सक्छ । तर, हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रो भयो भने त्यो समस्या आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । कतिपय कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नाफाको मात्र लक्ष्य दिइन्छ । त्यसैले, उनीहरू हाम्रो ८० प्रतिशतको जुन सीसीडी रेडियो छ, त्यहीभित्र बसेर व्यवसाय जसरी भए पनि बढाऊँ भन्नेमा लागेकाले यो समस्या आएको हो । त्यसैले, आन्तरिक व्यवस्थापनको बेमेलको कारण तरलताको समस्या भएको मेरो अनुमान छ । सृजना फाइनान्सको हकमा अहिलेसम्म आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रो गरेकाले आजको दिनमा ३५ प्रतिशत तरलता बोकेर बसेका छौं ।
आन्तरिक व्यवस्थापनले तरलताको समस्या समाधान गरेको भन्नुभयो । यसका केही उपाय बताइदिनुहुन्छ कि ?
सीसीडी रेशियो ८० प्रतिशत राख्न पाउने भनेपछि मेरो कम्पनीमा निक्षेपको सन्तुलन कस्तो छ, निक्षेपको बनावट कस्तो छ, त्यो हेरेर ७० राख्ने वा ७५ राख्ने अथवा ८० मै जाने भन्ने कुरा संस्थाको निर्णयमा भर पर्छ । संस्थागत निक्षेप लिएर लामो समयका लागि लगानी गरेका बैङ्कहरूले पछि निक्षेप आइहाल्छ, अनि संस्थागत निक्षेप फिर्ता गरौंला भनेर हचुवाको भरमा व्यवस्थापन गरे । त्यही कारण अहिले तरलता अभाव भएको हो । त्यसैले, हामी हाम्रो निक्षेपको सन्तुलन र बनावट हेरेर त्यो कति समयका लागि लगानी गर्ने भन्ने निर्णय गर्छौं । सकेसम्म त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा हाम्रो तरलता व्यवस्थापनमा सजिलो हुन्छ भनेर हामी त्यहीअनुसार गर्दै आएका छौं । यसैले, हामी तरलताको समस्याबाट मुक्त छौं ।
कर्जा मागको अवस्था के छ ?
कर्जा मागको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने वाणिज्य बैङ्कमा पनि त्यति लाइन छैन होला, जति हाम्रोमा छ । पछिल्लो अवस्थामा हामीले खोलेका शाखाहरूमध्ये सुनसरीको हरिनगराकै उदाहरण दिऊँ, आजसम्मको रिपार्टको आधारमा २ सय ६८ ओटा माग फारम कर्जा प्रवाहका लागि बाँकी छन् । सबैलाई सेवा दिन नभ्याएको अवस्था छ । ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ बैङ्कको पहुँच कम छ, त्यस्तो ठाउँमा हामी पुगेकाले त्यस क्षेत्रका मानिस लाइन लागेर हामीसँग कर्जा लिन्छन् । त्यसमा पनि साना रकमका कर्जा पनि हामीले वितरण गरिरहेका छौं ।
तरलता अभाव भयो भनेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाइरहँदा सृजना फाइनान्सले के गरेको छ ?
हाम्रो भर्खरैको निर्णयमा कर्जामा ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेका छौं । हामीले कर्जामा २ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज घटाएका छौं । उता निक्षेपमा भने केही प्रतिशत बढाएका छौं । अहिले १४ देखि १७ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्छौं भने निक्षेमा १४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका छौं । यसअघि निक्षेपमा १२ र कर्जामा १८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गरेका थियौं ।
कर्जामा ब्याजदर घटाउँदा निक्षेपमा बढाउनुको कारण के त ?
हामी क्षेत्रीयस्तरको सानो कार्यक्षेत्र भएको सङ्स्था हौं । वाणिज्य बैङ्कहरूले उच्च ब्याज दिनेबित्तिकै फाइनान्स कम्पनीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुने भएकोले आफ्नो निक्षेप टिकाइराख्न पनि वाणिज्य बैङ्कले बढाएको सरह वा उनीहरूको भन्दा अलिकति बढी नै ब्याजदर दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस कारण निक्षेप बाहिरिन नदिन निक्षेपको ब्याज बढायौं भने ग्रामीण भेगका साहू–महाजनको चर्को ब्याजमा ऋण लिँदै आएका हाम्रो सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राखी कर्जामा ब्याज घटाएका हौं ।
यसरी कर्जामा ब्याज घटाउँदा व्यवसायको सफलता दिगो होला त ?
यो कुरा हाम्रो बैठकमा पनि उठेको थियो । बचतमा ब्याज बढाएको अवस्थामा कर्जामा घटाउँदा नाफामा असर गर्ने हो नि भनेर । कम्पनीका नाफाको पछिल्लो अवस्था अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५५ प्रतिशत बढी छ । यसरी कम्पनीको पछिल्लो अवस्था राम्रै भएको कारण आफ्नो व्यवसायलाई मात्र नहेरेर सेवाग्राहीको हितमा पनि ध्यान दिएका हौं । हामी कुनै निर्णय गर्नुपर्दा उद्यमी भएर सोच्छौं अथवा किसान भएर सोच्छौं, सेवा लिने मान्छे भएर सोच्छौं । व्यावसायिक सफलतालाई खासै ध्यान नदिए पनि हामी सफल छौं । आशा छ सफल रहिरहनेछौं ।
वर्षैपिच्छे तरलताको समस्या दोहोरिरहनुको अन्य कारण केही छन् कि ?
यस विषयमा वाणिज्य बैङ्क, बैङ्कर्स सङ्घलगायतले गत वर्षदेखि नै हाम्रो बजेट खर्च भएन, उद्योगधन्दा खोलिएन, हाम्रो सानो अर्थतन्त्र त्यत्तिकै सङ्कुचित भएपछि तरलता समस्या भयो भन्ने गरेका छन् । यसमा म सहमत छैन । यसलाई सूक्ष्म र बृहत् दुई हिसाबमा हामी हेरौं । म हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनलाई जोड दिनुपर्छ भन्छु । हामीले निक्षेपको सन्तुलन हेरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्‍यौं भने त्यति समस्या नहोला । त्यस कारण ब्याजदर बढाएर एक–अर्कासँग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहनुभन्दा आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनमा ध्यान दियौं भने वर्षैपिच्छे तरलताको समस्या नहुन सक्छ ।
सुजुकीबाट पाउने प्रतिफल अन्य ब्राण्डको भन्दा राम्रो छ
५ असार २०७५, मंगलवार ०८:३७
कर तिर्न अटेर गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्छौं
३ असार २०७५, आईतवार ०७:२१
अर्थोडण्टिक दाँतको कस्मेटिक उपचार पनि हो
१ असार २०७५, शुक्रबार ०८:५५
नेपाललाई “अल सिजन टुरिजम हब”को रूपमा विकास गर्न जरुरी छ
२७ जेष्ठ २०७५, आईतवार ०९:४६